ကွန်ပျူတာ Laptop အသစ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
29 Oct 2018 . 4:40 PM
Laptop တစ်လုံးကို အသစ်ဝယ်ယူပြီဆိုရင် များသောအားဖြင့် ဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်တွေမှာပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး လိုအပ်တဲ့ Software တွေနဲ့ အစပိုင်းပြင်ဆင်မှုတွေကို လက်တန်းသုံးလို့ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင် အပ်လိုက်ပြီး အကုန်လုံးပြီးမှ တစ်ခါတည်းတန်းသုံးကြတာများပါတယ်။ အခုဒီ Article ကနေပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့ နောက်ပိုင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာ error မတက်အောင် ဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ ဘာတွေပြုလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Windows ကို အသစ်ပြန်တင်နိုင်တယ်ဆိုရင် ပြန်တင်ပါ
လက်ရှိ ရောင်းချနေတဲ့ Laptop ကွန်ပျူတာတွေက Cracked Windows နဲ့ အခြား Software အနည်းငယ်ပါဝင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာပါတဲ့ Windows တွေက Windows 10 ဆိုရင်တောင် Version နိမ့်နေတတ်တဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် Latest Windows CD တစ်ချပ်ဝယ်ပြီး Windows အသစ်ပြန်တင်လိုက်တာက နောက်ပိုင်း Internet ချိတ်သုံးတဲ့အခါမှာ နောက်ကွယ်ကနေ အလိုအလျောက် Windows Update download ဆွဲနေတာကို ကာကွယ်ပြီးဖြစ်သလို Features အသစ်တွေကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့အချက်က Hard disk Partition ကို Windows အသစ်ပြန်တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်နှစ်သက်သလို ပြန်ပိုင်းလို့ရတာပါ။
(၂) နောက်ပိုင်း Internet ချိတ်ပြီး အသုံးပြုရဖို့ရှိတယ်ဆိုရင် Windows Update အရင်လုပ်တာ (သို့) ပိတ်ပစ်ပါ
ဒီအချက်ကတော့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲပြားမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ Windows 10 လိုမျိုး Features Update မကြာမကြာထွက်တဲ့ Windows ကို အသုံးပြုနေပြီး ကိုယ်တိုင်ကလည်း Features အသစ်တွေကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Update ပြုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာ Computer ဝယ်ယူပြီးပြီးချင်း အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Data ပျက်မှာမဟုတ်ပေမယ့် အခြား Data တွေ Software တွေမသွင်းရသေးတဲ့အတွက် Update ပြုလုပ်တဲ့အချိန်က ပိုပြီးမြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Update လုပ်ရတာ စိတ်မဝင်စားဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက် အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင် Windows Update ကို ပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ ဆိုင်က Technician ကို အကူအညီတောင်းနိုင်သလို This PC (My Computer) ကို Right Click နှိပ်ပြီး Manage – Service & Applications – Services မှာ Windows Update ကို ရှာပြီး Disable လုပ်လိုက်ရင် အလိုအလျောက် Update လုပ်နေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
(၃) Browser, Media Player နဲ့ အခြားသော လိုအပ်တဲ့ Software တွေကို သွင်းပါ
ဒီအချက်ကတော့ ကိုယ်ဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်ကို အကူအညီတောင်းလို့ရတဲ့ အပိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Browser, Media Player စတဲ့ Software အသေးတွေကို နောက်ဆုံး Version ကို ကိုယ်တိုင် Download ဆွဲပြီးသွင်းတာကိုပိုအားပေးပါတယ်။ MS Office, Photoshop နဲ့ အခြား Software အကြီးတွေကိုပဲ ဆိုင်ကို အဓိကသွင်းခိုင်းတာ အဆင်ပြေမှာပါ။
(၄) Windows Defender (သို့) အခြား Anti Virus ကို တစ်ခါတည်း Update ပြုလုပ်ပါ
Virus ဝင်ရောက်တာက ကွန်ပျူတာတွေမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ပြသာနာတွေထဲမှာပါပါတယ်။ Windows Defender လို Anti Virus က Windows 8 မှာထဲက တပါတည်း ပါဝင်ပေမယ့် တကယ်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် Virus & Spy Definitions က Up to Date ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့သော Laptop Brand တွေက McAfee, Norton စတဲ့ License Anti Virus Software တွေကို လက်ဆောင်ပေးတတ်လေ့ရှိပြီး အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုရင်လည်း တခါတည်းသွင်းပြီး Update လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
(၅) Drivers တွေကို Update ပြုလုပ်ပါ
ဒီအချက်က ကျိန်းသေလိုအပ်တဲ့အချက်မဟုတ်ပေမယ့် အချို့သော Graphic Card သီးခြားပါဝင်တဲ့ Laptop တွေမှာ Graphic Driver ကို Update ပြုလုပ်လိုက်တာက Game ဆော့တဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုသိသာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Graphic Driver တွေကိုတော့ Update အမြဲလုပ်နေတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ Desktop Wallpaper, Windows Themes တွေပြောင်းတာ၊ Taskbar or Start Menu မှာ ကိုယ်အသုံးများတဲ့ Software တွေကို Pinned ပြုလုပ်ထားတာ…အစရှိတာတွေပြုလုပ်ပြီးရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ထားတဲ့ Laptop ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Laptop တဈလုံးကို အသဈဝယျယူပွီဆိုရငျ မြားသောအားဖွငျ့ ဝယျယူတဲ့ဆိုငျတှမှောပဲ ရှေးခယျြဝယျယူပွီး လိုအပျတဲ့ Software တှနေဲ့ အစပိုငျးပွငျဆငျမှုတှကေို လကျတနျးသုံးလို့ရတဲ့အဆငျ့ထိရောကျအောငျ အပျလိုကျပွီး အကုနျလုံးပွီးမှ တဈခါတညျးတနျးသုံးကွတာမြားပါတယျ။ အခုဒီ Article ကနပွေီးတော့ ကိုယျ့စိတျတိုငျးကပြွငျဆငျနိုငျဖို့နဲ့ နောကျပိုငျးသုံးနတေဲ့အခြိနျမှာ error မတကျအောငျ ဝယျယူပွီးတာနဲ့ ဘာတှပွေုလုပျသငျ့လဲဆိုတာကို ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
(၁) Windows ကို အသဈပွနျတငျနိုငျတယျဆိုရငျ ပွနျတငျပါ
လကျရှိ ရောငျးခနြတေဲ့ Laptop ကှနျပြူတာတှကေ Cracked Windows နဲ့ အခွား Software အနညျးငယျပါဝငျပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့မှာပါတဲ့ Windows တှကေ Windows 10 ဆိုရငျတောငျ Version နိမျ့နတေတျတဲ့အတှကျ ဖွဈနိုငျရငျ Latest Windows CD တဈခပျြဝယျပွီး Windows အသဈပွနျတငျလိုကျတာက နောကျပိုငျး Internet ခြိတျသုံးတဲ့အခါမှာ နောကျကှယျကနေ အလိုအလြောကျ Windows Update download ဆှဲနတောကို ကာကှယျပွီးဖွဈသလို Features အသဈတှကေိုလညျး သုံးစှဲနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ပိုပွီးကောငျးတဲ့အခကျြက Hard disk Partition ကို Windows အသဈပွနျတငျတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျနှဈသကျသလို ပွနျပိုငျးလို့ရတာပါ။
(၂) နောကျပိုငျး Internet ခြိတျပွီး အသုံးပွုရဖို့ရှိတယျဆိုရငျ Windows Update အရငျလုပျတာ (သို့) ပိတျပဈပါ
ဒီအခကျြကတော့ လူတဈယောကျခငျြးစီပျေါမှုတညျပွီး ကှဲပွားမှာဖွဈပွီး တကယျလို့ Windows 10 လိုမြိုး Features Update မကွာမကွာထှကျတဲ့ Windows ကို အသုံးပွုနပွေီး ကိုယျတိုငျကလညျး Features အသဈတှကေို သုံးခငျြတယျဆိုရငျတော့ Update ပွုလုပျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျဟာ Computer ဝယျယူပွီးပွီးခငျြး အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။ Data ပကျြမှာမဟုတျပမေယျ့ အခွား Data တှေ Software တှမေသှငျးရသေးတဲ့အတှကျ Update ပွုလုပျတဲ့အခြိနျက ပိုပွီးမွနျဆနျမှာဖွဈပါတယျ။
တကယျလို့ Update လုပျရတာ စိတျမဝငျစားဘူး၊ ဒါမှမဟုတျ အငျတာနကျ အခကျအခဲရှိတယျဆိုရငျ Windows Update ကို ပိတျထားတာအကောငျးဆုံးပါ။ ဆိုငျက Technician ကို အကူအညီတောငျးနိုငျသလို This PC (My Computer) ကို Right Click နှိပျပွီး Manage – Service & Applications – Services မှာ Windows Update ကို ရှာပွီး Disable လုပျလိုကျရငျ အလိုအလြောကျ Update လုပျနမှောမဟုတျတော့ပါဘူး။
(၃) Browser, Media Player နဲ့ အခွားသော လိုအပျတဲ့ Software တှကေို သှငျးပါ
ဒီအခကျြကတော့ ကိုယျဝယျယူတဲ့ဆိုငျကို အကူအညီတောငျးလို့ရတဲ့ အပိုငျးပါ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ Browser, Media Player စတဲ့ Software အသေးတှကေို နောကျဆုံး Version ကို ကိုယျတိုငျ Download ဆှဲပွီးသှငျးတာကိုပိုအားပေးပါတယျ။ MS Office, Photoshop နဲ့ အခွား Software အကွီးတှကေိုပဲ ဆိုငျကို အဓိကသှငျးခိုငျးတာ အဆငျပွမှောပါ။
(၄) Windows Defender (သို့) အခွား Anti Virus ကို တဈခါတညျး Update ပွုလုပျပါ
Virus ဝငျရောကျတာက ကှနျပြူတာတှမှော အဆိုးဝါးဆုံး ပွသာနာတှထေဲမှာပါပါတယျ။ Windows Defender လို Anti Virus က Windows 8 မှာထဲက တပါတညျး ပါဝငျပမေယျ့ တကယျထိရောကျစှာအသုံးပွုနိုငျဖို့ဆိုရငျ Virus & Spy Definitions က Up to Date ဖွဈနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ အခြို့သော Laptop Brand တှကေ McAfee, Norton စတဲ့ License Anti Virus Software တှကေို လကျဆောငျပေးတတျလရှေိ့ပွီး အဲ့လိုပေးတယျဆိုရငျလညျး တခါတညျးသှငျးပွီး Update လုပျထားသငျ့ပါတယျ။
(၅) Drivers တှကေို Update ပွုလုပျပါ
ဒီအခကျြက ကြိနျးသလေိုအပျတဲ့အခကျြမဟုတျပမေယျ့ အခြို့သော Graphic Card သီးခွားပါဝငျတဲ့ Laptop တှမှော Graphic Driver ကို Update ပွုလုပျလိုကျတာက Game ဆော့တဲ့အခြိနျတှမှော ပိုသိသာနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ Graphic Driver တှကေိုတော့ Update အမွဲလုပျနတော ပိုပွီးအဆငျပွစေမှောဖွဈပါတယျ။
ကနျြတဲ့အရာတှကေတော့ Desktop Wallpaper, Windows Themes တှပွေောငျးတာ၊ Taskbar or Start Menu မှာ ကိုယျအသုံးမြားတဲ့ Software တှကေို Pinned ပွုလုပျထားတာ…အစရှိတာတှပွေုလုပျပွီးရငျ ကိုယျကိုယျတိုငျ စိတျတိုငျးကပြွငျဆငျထားတဲ့ Laptop ကှနျပြူတာတဈလုံးကို သုံးစှဲနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။